Kitra – Ligue des champions d’Afrique 2016 : tafakatra amin’ny 1/16-ndalana ny Cnaps Sport | NewsMada
Kitra – Ligue des champions d’Afrique 2016 : tafakatra amin’ny 1/16-ndalana ny Cnaps Sport
Manohy ny lalany ny Cnaps Sport eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “ligue des champions”, taranja baolina kitra. Resiny, teo amin’ny lalao miverina ny Gor Mahia avy any Kenya.
Tamin’ny isa tokana, 1 noho 0 ny nandresen’ny Cnaps Sport, ny Gor Mahia, nandritra ny lalao miverina amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra. Fihaonana, notanterahina ny asabotsy lasa teo, tao amin’ny kianja Rabemananjara. Fandresena izay nahazoan’ny ekipa tompondakan’i Madagasikara, ny tapakila, hiakarany amin’ny dingan’ny ampaha-16-ndalana.
Baolina tafiditr’i Njiva, teo amin’ny minitra faha-28, taorian’ny tolotra tsara nifanaovany tamin’i Rinjala sy Nono. Nanjakan’ny Malagasy aloha ny fihaonana, satria nanantombo teo amin’ny fanafihana ny Cnaps Sport, saingy mbola nisy lesoka teo amin’ny famaranana. Na izany aza, niezaka nanao fanafihana hatrany ny Kenyanina, nahitana an’i Agwanda Enock, saingy tsara fipetraka hatrany ny vodilaharan’ny Cnaps Sport.
Niezaka namezivezy baolina tao afovoan’ny kianja, hatrany ny Malagasy, izay nanahirana ny Gor Mahia, izany. Tsy nisy intsony ny baolina tafiditra tao anatin’ny fizaram-potoana voalohany na dia samy nitady hirika nampidirana izany aza, ny an-daniny sy ny an-kilany.
Na dia efa nanantombo teo amin’ny isa aza ny Cnaps Sport, tsy niova ny tarigetran’i Hery Be, mpanazatra fa manafika hatrany. Totoafo ny fanafihan’ny Malagasy, anisan’izany ny an’i Toby izay nahavita nanolotra baolina ho an’i Nono (49 mn), izay nosakanan’ny vodilaharana Kenyanina tamin’ny tanany, saingy tsy nanome “penalty”, ny mpitsara. Teo koa ny an’i Njiva (52 mn), izay tsy nahavoadaka tsara ny baolina. Be loatra ny fikoropahana narahin’ny fahamaizana ka tsy tafiditra ny baolina.
Tsy nahavita baolina intsony ny Gor Mahia, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa fa dia niantehitra tamin’ny valim-panafihana tsy dia natahorana loatra. Nanjakan’ny Cnaps Sport, ny lalao saingy tsy nahitam-bokany ihany koa izany.
Tsy nisy intsony ny baolina tafiditra taorian’izay. Tafakatra ny Cnaps Sport, ary ny Wydad de Casablanca, avy any Maraoka, no hifandona aminy. Ny asabotsy 12 marsa, ny lalao mandroso any Maraoka ary herinandro aorian’io ny fihaonana miverina any Mahajanga hatrany.
“Efa manomboka mihamatotra ny mpilalaon’ny Cnaps Sport, raha oharina tamin’ny taon-dasa. Na izany aza, mbola misy hatrany ireo lesoka tsy maintsy amboarina hiatrehana ny fihaonana manaraka”, hoy i Hery Be, mpanazatra.
“Betsaka ireo mpilalaonay niala nifindra toerana ka nisian’ny lesoka teo aminay”, hoy Franck Nutall, mpanazatran’ny Gor Mahia.
Synese (Iraka manokana Mahajanga)